Simia aygula လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၅၈
မျောက်တံငါများကို အရှေ့တောင်အာရှတွင် တွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ ရေကူးကျွမ်းကျင်ပြီး အမြီးသည် ခန္ဓာကိုယ်ထက် ပိုရှည်သည်။ ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်ခွဲတွင် အရွယ်ရောက်ပြီး ၁၅၉ ရက်မှ ၁၇၈ ရက် အထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်။ အသက် ၁၅ လ မှ ၁၈ လတွင် သားခွဲသည်။ သက်တမ်းမှာ (၂၀) နှစ် ဖြစ်သည်။
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ Baltimore: ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 161–162။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။
↑ Eudey, A., Kumar, A., Singh, M. & Boonratana, R. (2020). "Macaca fascicularis". IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN.
↑ Napier, P. H. (1983). "Simia fascicularis Raffles, 1821 (Mammalia, Primates): request for the suppression under the plenary powers of Simia aygula Linnaeus, 1758,asenior synonym. Z.N.(S.) 2399". Bulletin of Zoological Nomenclature 40 (2): 117–118.
↑ Smith, J. D. D. (2001)။ Supplement 1986-2000။ Official List and Indexes of Names and Works in Zoology။ International Trust for Zoological Nomenclature။ 28 September 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (၂၀၀၅)။ "Species Macaca fascicularis"။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ Linnaeus၊ C. (1758)။ Systema naturæ. Regnum animale (10th ed.)။ Sumptibus Guilielmi Engelmann။ p. 27။ 19 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဒေါက်တာခင်ဆွေဦး (2015–2016)။ ကဏန်းစားမျောက် သို့မဟုတ် ဇရပ်တောမျောက်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆။ မြိတ်တက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း။ p. ၁၁၂။ CS1 maint: date format (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျောက်တံငါ&oldid=728183" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။